Ahoana no hahasambatra kokoa ny sakaizanao: 6 Tsy misy toro-hevitra Bullsh * t! - Fifandraisana
Ahoana no hahasambatra kokoa ny sakaizanao: 6 Tsy misy toro-hevitra Bullsh * t!
Ny fitiavana dia zavatra tadiavin'ny olona maro amin'ny fifandraisana, nefa mety ho sarotra amin'ny sasany ihany koa izany.
Na be loatra io na tsy ampy, ny fanehoana sy ny fitiavam-pitiavana dia mety hiteraka fifandirana na dia eo amin'ny fifandraisana marin-toerana indrindra aza.
Amin'ity lahatsoratra ity dia hizaha ny sasany amin'ireo fomba ahafahanao roa maneho fitiavana ny mpiara-miasa aminao ary koa mandray izany aminy.
Inona no atao hoe fitiavana?
Amin'ny ankapobeny, ny fitiavana dia fanehoana amin'ny olona iray fa miahy ianao amin'ny alàlan'ny fifandraisana ara-batana, toy ny famihina, tanana, ary oroka.
Mety miainga amin'ny fihetsika kely ka hatramin'ny fampisehoana lehibe. Ny fitiavana dia samy hafa amin'ny fifandraisana rehetra, ary samy manana ny fiandrasana ny zavatra tadiavintsika sy izay faly atolotra isika rehetra.
Na dia olona matoky tena amin'ny ankapobeny aza ianao, ny fanehoam-pitiavana dia mety hahatsapa ho toy ny fitsambikinana lehibe! Ara-dalàna tanteraka izany, satria tsy mitovy ny fifandraisana rehetra.
Izay mety ahazoanao aina miaraka amin'ireo namanao akaiky (mamihina, ohatra) dia mety hahatsapa ho mampatahotra anao amin'ny vadinao vaovao.
Torohevitra 6 hanehoana firaiketam-po amin'ny fifandraisana
Mety ho tian'ny namanao ianao hampiseho fitiavana azy ireo bebe kokoa ary mety tsy hahazo aina tanteraka amin'izany ianao.
Lazao amin'ny tenanao fa mety sy ara-dalàna izao!
Tsy ny olona rehetra no mitovy fihetseham-po amin'ny fanehoana fitiavana, ka tsy tokony hahatsapa ho meloka ianao raha tsy zavatra ilainao manokana na ankafizinao izany.
Mifampiresaha amin'ny vadinao momba ny antony itehirizanao na ny antony tsy itiavanao hifandray akaiky amin'izy ireo amin'ity fomba ity.
Handeha torohevitra vitsivitsy izahay izay hanampy anao hahita ambaratongam-pitiavana ahazoanao aina.
Ampahatsiahivo ny tenanao fa ny fitiavana dia ny fanehoana fitiavana sy fikarakarana - zavatra tokony hankafizana sy ankamamiana fa tsy zavatra mety hiteraka alahelo be.
Samy hahita toerana ahazoana aina ianao amin'ny resaka fanomezana sy fandraisana fitiavana, maharitra fotoana vitsivitsy fotsiny izany.
wwe smackdown 5/5/16
1. Hajao ny fetra - na ny anao na ny azy.
Rehefa mizaha toetra amam-pitiavana vaovao miaraka amin'ny mpiara-miasa ianao, na fifandraisana vaovao io na efa niarahanao nandritra ny fotoana kelikely, dia ilaina ny mitadidy faritra .
Izay rehetra mahatonga anao na izy ireo hahatsapa ho mahazo aina dia mila izany nohajaina tamim-panajana , izay midika hoe tsy mifamporisika na manao zavatra ho toy ny fandrahonana.
Na eo aza ny fanirianao haneho fitiavana bebe kokoa ny vadinao dia tsy azonao atao ny mampahatsapa azy ireo hoe mila manao an'io 'raha tsy izany…'
Ny fitiavana dia tsy puce varotra na fangatahana ataonao amin'ny olon-kafa, fa fanehoam-pitiavana akaiky sy fitiavana.
Ny haavon'ny fitiavana lalina indrindra dia avy amin'ny fahalalana olona iray. Midika izany fa ny fahatakarana ny lasa sy ny fahafantarana ny trauma na fanaintainana nosedraina tamin'ny mpiara-miasa na olona taloha.
Miezaha mahatadidy fa ireo zavatra ireo dia mitaky fotoana be ho an'ny olona sasany, ary tsy azonao atao maika ny fanasitranana olona hafa.
Raha mihazona ireo sakaizanao ireo antony ireo dia ampahatsiahivo ny tenanao fa tsy an'ny tena manokana izany ary mety tsy hanova ny azy ny fitondran-tenanao raha tsy manao fanitsiana koa izy ireo.
Toy izany koa, tsy tokony hahatsapa ianao fa toa mila manery ny tenanao hanana fifandraisana feno fitiavana.
ny mahasamihafa ny fitiavana sy ny firaisana
Raha sendra zavatra nahatsiravina ianao dia mila manome fotoana kely ny tenanao alohan'ny hirosoana amin'ny fanehoana fitiavana bebe kokoa.
2. Manokàna fotoana hiarahan'ny mpivady.
Manomàna andro ahafahanao ‘coupley’ bebe kokoa - ny fidirana amin'io karazana toe-tsaina io dia manampy anao hanana toe-tsaina mifantoka sy akaiky kokoa.
Mikasa ny zavatra mahafinaritra hiaraha-miasa izay manampy anao hahatsapa ho mahazo aina miaraka ary koa mientanentana ny mifanakaiky.
Ny fandaminana ny alin'ny daty dia zavatra izay matetika manjavona indray mandeha eo amin'ny fifandraisana, toy ny fanehoam-pitiavana. Raha manapa-kevitra ny hifandray akaiky kokoa ianareo sy ny olon-tianao dia hanaraka izany ny firaiketam-po.
Manaova fanoloran-tena amin'ny daty iray alina isan-kerinandro na roa, miankina amin'ny fandaharam-potoananao.
Alao antoka fa samy hahatakatra ianareo fa zavatra tokony horaisina am-pahamatorana - raha toa ka mila manafoana ny iray aminareo dia tokony hisy antony marim-pototra izany.
Ny ampahany lehibe amin'ny fanokafana olona dia ny fifampitokisana, ary ity karazana fanoloran-tena ity dia hanampy anao roa hiasa mifampatoky bebe kokoa , na firy taona na firy ianao no niaraka.
Ny fotoana iarahan'ny mpivady dia mety amin'izay tianao, raha mbola zavatra ankafizinao izany.
Ny daty sasany dia ny fanaovana zavatra tian'ny namanao na dia tsy tianao aza izany, satria te hampiseho ny fiahianao anao….
rehefa misy bandy misintona tampoka ny zavatra tokony hatao
FA… IRETO daty mila zavatra ianao na ankafizo ny fanaovana - tena zava-dehibe ny fahatsapana fa mahazo aina miaraka ianareo, satria mety hisokatra kokoa ianao ary ho vonona hanaiky fitiavana bebe kokoa ny vadinao.
Makà fotoana handaminana ireo karazana daty ireo. Aza mandeha mahitsy amin'ny safidy mora toy ny sakafo hariva sy ny sarimihetsika (raha tsy hoe izany no tena tianareo roa atao).
Amin'ny fanaovana fombafomba amin'ireo daty, dia samy hanana fotoana hifaliana sy hijerena azy ireo ianao.
Midika izany fa hanana ‘hetsika’ sahaza tokony hirosoana ianao, ary samy hanomboka handinika izany ianareo ary hifampizara fitiavana bebe kokoa. Handeha amin'ny fombafomba sy fanazaran-tena amin'ny antsipiriany bebe kokoa isika amin'ny manaraka…
Mety tianao ihany koa (mitohy etsy ambany ny lahatsoratra):
Inona no hatao momba ny fifandraisana izay tsy manana fifandraisana akaiky sy fifandraisana
Dingana 17 mba tsy dia ho akaiky kokoa sy tsy ilaina amin'ny fifandraisana
Raha mahatsiaro ho diso fanantenana ianao amin'ny fifandraisanao, ataovy ireto zavatra 7 ireto
Tokony hiova ho an'ny olona tianao ve ianao?
Ahoana ny fomba hahatonga ny olona hahatsapa ho manan-danja, miavaka ary tiana
Fomba 7 hanehoana fahalemena ara-pientanam-po amin'ny fifandraisana iray
3. Vazivazy manodidina.
Ny filalaovana lalao miaraka dia hanampy anao hahazo aina bebe kokoa amin'ny fikasihana sy ny maha-akaiky anao.
Ity dia mifandray amin'ny fitokisana koa - raha afaka misokatra sy adala amin'ny olona iray ianao dia matoky azy ireo sy amin'ny tanjaky ny fifandraisanao. Midika izany fa ianao sy ny olon-tianao dia hahatsapa ho milamindamina kokoa eo amin'ny samy izy, izay hamporisika ny firaiketam-po bebe kokoa avy aminareo roa.
Na dia niresaka momba ny fandraisana ny zavatra matotra sy hanao fanoloran-tena aza izahay, dia misy ihany koa ny fotoana ahafahana miala sy mifalifaly.
Amin'ny famelana ny tenanao hifampitsaha-potoana, dia hazava kokoa ny tontolo iainana. Arakaraka ny maha-mahazo aina sy maivana kokoa ny zavatra misy anao, dia vao mainka maniry ny haninjitra tanana sy hihazona tanana na hikapoka azy ireo amin'ny sandry (maivana!).
Ny kiho malefaka sy ny fihomehezana dia tena afaka mampiakatra ny fihetseham-po koa, mahatonga ny zavatra hahatsapa ho maloto na dia efa niaraka nandritra ny taona maro aza ianao.
Ny fampandraisana anjara ny olon-tianao amin'ny fomba toy izany dia fampiroboroboana ny ego ho azy ireo ihany koa - arakaraka ny fahatokisan'izy ireo bebe kokoa amin'ny alàlan'ny 'valisoa' amin'ny fifantohanao, no vao mainka hanomezana fitiavana ara-dalàna azy ireo.
Hahatonga anao hahatsapa ho tsara ihany koa izany - tsy mangataka ny fitiavany ianao, noho izany dia toy ny fandokafana fa tsy valin'ny fangatahanao.
Ampahatsiahivo izany! Hanampy anao hahatsapa fahatokian-tena bebe kokoa amin'ny manaraka izany raha te hampiseho fitiavana sy fiheverana bebe kokoa amin'ny vadinao ary rehefa tadiavinao ho valiny.
Mijanona milalao ary hanomboka ho lasa fahazarana bebe kokoa izany. Ny fifanakaikezana ara-batana amin'ny olona iray dia afaka manampy anao hanaraka ny fihetsem-po sy ny eritreritra.
Ny zavatra tsotra toy ny filalaovana footsie eo ambanin'ny latabatra fisakafoanana dia mety hisy fiovana lehibe. Ity karazan-javatra ity dia misoko mangina tsara, ka tonga lafatra raha tsy tian'ny olon-tianao ny fampisehoana fitiavana eo imasom-bahoaka na saro-kenatra na menatra.
ahoana ny fahatsapana fa ratsy tarehy
Ary koa amin'ny fahamalinana amin'ny olon-kafa dia mandefa hafatra mazava ho an'ny mpiara-miasa aminao fa eo ianao, miaraka amin'izy ireo, ary te ho akaiky azy ireo ianao.
Averina indray, ny fanaovana an'io amin'ny fomba somary jokey dia manampy amin'ny fanesorana ny tsindry ary mety hialana sasatra kokoa izy ireo, hankafy azy ary haneho fitiavana anao ho setrin'izany.
4. Ataovy amin'ny teny izany.
Ny fitiavana dia tsy voatery ho ara-batana foana - ny firesahana dia tena tsara miaraka amin'ny fikasihan-tanana malefaka sy fihazonana tanana.
Miresaka momba ny fahatsapanao ary maninona no tianao be ny olon-tianao dia fomba tena tsara hanamafisana ny zavatra rehetra ataonao amin'ny alàlan'ny fifamatorana ara-batana.
Amin'ny fanaovanao izany dia hanome toky ny mpiara-miasa aminao ianao. Raha elaela ianareo no niaraka dia samy mahafantatra (manantena) ianareo roa fa mifankatia sy mifankatia, fa samy mila fampatsiahivana matetika daholo.
Hamarino tsara fa fantatry ny olon-tianao fa miaraka amin'izy ireo ianao safidy mavitrika - tianao ny mandany fotoana miaraka amin'izy ireo ary mankafy ny miaraka amin'izy ireo.
Ny fitenenana azy ireo sy ny fampahatsiahivana azy ireo fa mbola manintona azy ireo ianao dia hitondra fiovana lehibe eo amin'ny haavon'ny fifankatiavana eo amin'ny fifandraisanareo.
Arakaraka ny fahatokisan-tenanareo roa, ny tenanareo ary koa ny fifandraisanareo, no azo inoana kokoa fa haneho fitiavana sy haneho fiheverana bebe kokoa ianareo roa.
5. Ataovy milamina hatrany izy ireo amin'ny alàlan'ny tsy fitovizany.
Niresaka momba izany isika teo aloha, saingy teboka tena lehibe izy io izay tokony ho ao an-tsaina…
Arakaraky ny andehananao hatrany amin'ireo hetsika ireo no hitomboan'ny zavatra mahazo aina sy hahatsapa ho mahazatra.
Mamolavola teny na andianteny mifandraika amin'ny hetsika sasany, oh. miteny hoe 'tiako ianao' dia hitarika fifamihinana foana raha manamafy an'io fanao io ianao. Ny sakaizanao dia hanomboka tsy ho ela, antenaina ary te famihinana rehefa maheno anao miteny azy ireo hoe tianao izy ireo.
Hanomboka hampifandray an'izany rehetra izany amin'ny fihetseham-po mafana sy falifaly izy ireo ary hahatsapa ho toy ny fandaharam-potoana azo antoka kokoa.
Arakaraka ny anaovanao an'ity dia vao mainka mahazo aina izy ireo rehefa manohina azy ireo ianao sy mamihina azy ireo. Hankany amin'ny sehatra antenaina hanatanterahana izany fihetsika izany, ary avy eo amin'ny dingana irina.
Raha vantany vao zatra nasehon'izy ireo tamim-pitiavana izy ireo dia maniry bebe kokoa izany! Azonao atao ny miteny hoe 'tiako ianao' ary miandry - ho vonona amin'ny famihina izy ireo, noho izany, rehefa tsy manolotra iray avy hatrany ianao dia hanao hetsika hamihina anao izy ireo.
Hahatsapa izy ireo fa toa mandeha fotsiny amin'ny fanazaran-tena namboarinareo roa, fa izy ireo koa dia handray anjara mavitrika amin'ny fanehoana fitiavana bebe kokoa.
Arakaraka ny hamelanao azy ireo hanatona anao no ahazoanao aina kokoa, ary vao mainka izy ireo hanao izany amin'ny nahim-pony.
Ataovy mazava tsara fa tianao izany rehefa manatona anao voalohany izy ireo, indrindra raha tsy nanao an'izany matetika izy ireo izao.
Hahafaly azy ireo ny mahafantatra fa mampahafinaritra anao izy ireo ary hahatsapa ho faly amin'ny fanaovana izany satria efa tafiditra ao anatin'ny fahazarana milamina sy miorina io.
manambady izy fa tiako izy
6. Mifampiresaka ary manao ny marina.
Aza menatra ny namanao na ataovy mahatsapa ho meloka izy ireo, fa aza misalasala mampahafantatra azy ireo ny fahatsapanao.
Mety hoe maniry firaiketam-po bebe kokoa ianao satria mahatsapa tsy fahatokisan-tena, na manana fotoana sarotra amin'ny faritra hafa amin'ny fiainanao.
Mety ho noho ianao te-haneho ny fitiavanao olona iray ary te-hahazo antoka fa mamaly sy mamaly.
Misokatra amin'ny fanehoan-kevitra!
Tsy ny firesahanao amin'ny olon-tianao fotsiny no tadiavinao fa ny ahazoanao antoka fa mahazo aina koa izy ireo.
Matetika diso mamaky famantarana ireo mpiara-miasa, koa alao antoka fa eo amin'ny pejy iray ihany ianao amin'ny firesahana zavatra. Ity dingana miresaka ity dia tsy tokony haharitra mandrakizay, noho izany ny tsy fahalavorariana voalohany mety ho iainanao dia zavatra miserana ihany.
Amin'ny fampifangaroana ireo dingana rehetra etsy ambony dia afaka manomboka mandroso tokoa ianao amin'ny lafiny fanomezana sy fandraisana fitiavana bebe kokoa amin'ny fifandraisanao.
Ny fifandraisana dia ny fahatokisana, ny fahamarinana ary ny fangorahana ary ny zavatra rehetra natolotray teto dia mifandray amin'ireo lohahevitra lehibe ireo.
Mifandraisa mba hahatsapa ho mahazo aina sy matoky tena kokoa amin'ny tenanareo ary koa ny fiaraha-miasa.
Aza adino ny mahatsapa tena ary manamarina amin'izay ilainao sy ny antony ilainao izany, ary alao antoka fa mahatakatra ny zava-mitranga ny vadinao.
Manokàna fotoana hifanarahana amin'ny fomba vaovao ary ataovy izay hifaneraserana tanteraka, tsy misy fanelingelenana na fanerena - olona roa fotsiny, feno fitiavana.
Arakaraka ny ahafahanao mampihatra an'io karazana fitondran-tena io, no vao mainka hifaneraseranao bebe kokoa, ny fihetsiky ny fitiavana, ny fiahianao ary ny fangorahana hitanao.
Mbola tsy azonao antoka ve ny fomba hananana fifandraisana feno fitiavana kokoa amin'ny vadinao? Miresaka an-tserasera amin'ny manam-pahaizana momba ny fifandraisana avy amin'ny Relationship Hero izay afaka manampy anao hahalala zavatra. Tsotra.
Ity pejy ity dia misy rohy afiliana. Mahazo komisiona kely aho raha misafidy ny hividy zavatra aorian'ny fikitihana azy ireo.
hafiriana aorian'ny fisarahana no tokony hanombohanao mampiaraka
maharitra hafiriana ny fitiavako olona
vola inthe banky 2017 daty
mandeha mandroba maty izay maty
inona no dikan'ny hoe tianao?